किन राख्छन् मृत्यु पछि शवको नाक र कानमा कपास ? — Motivatenews.Com
किन राख्छन् मृत्यु पछि शवको नाक र कानमा कपास ?
काठमाडौैं – संसारमा कुनै पनि जीवले पछिल्लो जन्ममा गरेको कार्यको आधारमा जन्म लिने गर्छन् र त्यसैअनुसार सुख र दुख भोग्छन् । आफ्नो कर्मको फल भोगेपछि पञ्चतत्वमा विलिन हुन्छन् । संसारमा बस्ने क्रममा मानिसको सत्य र झुठो दुवैको सामना गर्नुपर्छ, यो एक सामान्य कुरा हो, तर संसारमा परम सत्य के हो भनेर कसैले सोधेमा के जवाफ दिने ।
अध्यात्मिक कारणः गरुण पुराणअनुसार शवको खुला भएको भागमा सुनको सानो टुक्रा राख्ने मान्यता छ । यसरी सुनको टुक्रा शरीरको ९ अंगमा राख्ने गरिन्छ । जसमध्ये नाक, कान, आँखा र मुख इत्यादी पर्छन् । यसको पछाडीको मान्यता सुन अन्यन्तै पवित्र धातु हो । मृत शरीरको यी भागमा सुन राख्दा मर्ने मानिसको आत्मालाई समृद्धि प्राप्त हुन्छ । नाक र कानमा ठुलो प्वाल हुने भएकोले प्वालबाट केहि बाहिर ननिस्कीयोस भनेर सावधानीसहित रुईले बन्द गरिएको हो ।
२०७७ असोज ८ गते प्रकाशित